Tokony ho kosmetika Halal daholo ve ny makiazy?
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Tokony ho kosmetika Halal daholo ve ny makiazy?
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • Vaovao momba ny lamaody • Vaovao • Tourism • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Raha tsy nivily lalana teo amin'ny lalantsara Javits aho tamin'ny hetsika In-Cosmetics farany teo izay vao noeritreretiko Kosmetika Halal. Ny tsenan-tsakafo halal dia misy be any New York, noho izany dia tsy vaovao ny foto-kevitra halal; na izany aza, hafa tanteraka ny hevitra halal ampiharina amin'ny cosmetika.
Ho an'ny Silamo, ny teny hoe "halal" dia midika hoe azo ekena. Mifandraika amin'ny sakafo, dia miresaka manokana izay tsy misy alikaola, henan-kisoa (na vokatra kisoa) na avy amin'ny biby tsy novonoina araka ny lalàna sy ny fomba silamo (mitovy amin'ny foto-kevitr'i Kosher).
ao amin'ny tontolon'ny cosmetika, ny voambolana dia ahitana ny famerenana ireo akora ary koa ny loharanon'ny akora ary ny fomba fanamboarana ny vokatra miampy ny fisorohana ny fitsapana ny biby sy ny habibiana ataon'ny biby.
Tsena vaovao lehibe
Hatramin'ny 2013 dia nitombo be ny famokarana sy fivarotana kosmetika halal, ary tombanana hahatratra $ 60 -73 miliara ny varotra ao anatin'ny folo taona ho avy. Ny kosmetika Halal dia mameno ny banga eo amin'ny sehatry ny indostria satria misy Silamo maherin'ny 1.7 miliara eran'izao tontolo izao, mitovy amin'ny 23 isan-jaton'ny mponina manerantany (Ivotoerana Fikarohana Pew). Roa ambiny dimampolo isan-jaton'ny Muslins dia latsaky ny 24 taona, ary ity taranaka vao misondrotra ity dia mpanjifa salama saina tokoa. Ny fahefa-mividin'izy ireo dia nampitombo ny filan'ny cosmetika halal manentana ny varotra varotra varotra samihafa mba hampandeha any amin'ny firenena maro.
Ny fandrisihana lehibe hafa hidiran'ny orinasa (na hanitarana) amin'ny tsenan'ny kosmetika halal dia ny fitomboan'ny olana ara-pahasalamana eo amin'ny mpanjifa anatiny sy iraisam-pirenena miaraka amin'ny fahatsiarovan-tena eo amin'ny mpanjifa Muslin ny adidy ara-pivavahany.
Ny fanilihana ireo vehivavy Afovoany Atsinanana amin'ny indostrian'ny hatsaran-tarehy dia nifototra tamin'ny politika. Ho an'ny marika sasany, noroahina tsy hiala amin'ny fampielezan-kevitra ara-barotra ireo vehivavy ireo satria matahotra ny hihemotra ireo orinasa. Ny mpihaino tandrefana dia tsy zatra mahita vehivavy silamo - afa-tsy amin'ny vaovao hoe olona voageja. Ny haino aman-jery tandrefana dia mampiseho an'i Moyen orient ho fialofana ho an'ny mpampihorohoro na tany efitra fundamentalist. Ny ezaka marketing sasany dia milaza fa raha manao hijab na akanjo ara-pivavahana hafa ianao dia tsy afaka miraharaha ny hatsarana.
Misy tantara lava momba ny makiazy, fandroana ary fitafiana amin'ny kolontsaina afovoany Atsinanana izay noraisin'ny firenena tandrefana ho fananan'izy ireo ary hita izany amin'ny ranomanitra, eyeliners kohl ary fombafomba hafa fanaon'ny vehivavy rehefa mibontsina izy ireo. Ny vehivavy Muslin dia tsy tia atao an-jorom-bala ary ny tiany dia ny mividy vokatra amin'ny alàlan'ny loharanom-baovao mahazatra toy ny Bloomingdale sy Macy's.
Aza mety hofitahina
Zava-dehibe ny tsy hampifangaro ny halal amin'ny vegan. Ny vokatra legioma dia tsy misy vokatra vita amin'ny biby; na izany aza, afaka mampiditra toaka izy ireo. Marika marobe voamarina amin'ny halalàna no mampiasa akora mifanaraka amin'ny lalàna Islamika Sharia izay, angamba, tsy ho raisina ho etika tanteraka amin'ny marika izay mampiroborobo ny faharetana toy ny silicon-polymers, dimethicone ary methicone.
Silicone - ny polymère dia toy ny fonosana plastika ary mamorona sakana eo ambonin'ny hoditrao. Ity sakana ity dia afaka mikatona amin'ny hamandoana, fa mety mamandrika loto, hatsembohana ary potipoti-javatra hafa koa. Izy ireo dia afaka manentsina ny mason-koditra nefa miseho ho toy ny fahamainana sy manjavozavo fa tsy mony. Azon'izy ireo atao koa ny manary ny fizotran-dalàna mifehy ny hoditra amin'ny fandanjana azy.
Ny fikarohana dia manolo-kevitra fa ny dimethicone dia mampitombo ny mony satria manjary manakana ny hoditra izy io ary mamandrika ny hamandoana, bakteria, menaka amin'ny hoditra, sebum ary loto hafa. Marihina ihany koa fa manimba ny tontolo iainana ny vokatra satria tsy biodegradable ary noho izany dia mety handoto ny tontolo iainana mandritra ny fizotry ny famokarana ary aorian'ny fampiasana azy amin'ny fizotran'ny fanary.
Ny metamine dia mety hitarika amin'ny mony sy ny mainty amin'ny hoditra satria mamandrika ny zavatra rehetra ao ambaniny izy toy ny bakteria, sebum ary loto. Ny paty dia manakana ny hoditra tsy hanao ny asany mahazatra: ny hatsembohana, ny hafanana mifehy ary ny fandatsahana ireo sela maty. Izy io dia mety hiteraka na hampitombo ny fahasosoran'ny hoditra sy ny maso ary mety handrisika ny fanehoankevitra mahazaka. Heverina ho manimba tontolo iainana koa izy io satria tsy azo ihodivirana.
Ny orinasa sasany dia manasa ny vokariny amin'ny teny mamitaka na manjavozavo izay mahatonga ny mpanjifa Mieritreritra fa mividy organika; na izany aza, tsy marin-toetra tanteraka izy ireo. Mba hahazoana Certified Halal, ny orinasa dia tsy maintsy mandalo fizahana henjana henjana alohan'ny avela hanampy ny marika halal.
Ny orinasa dia tsy afaka mihambo ho voamarina halal raha tsy misy fanamarinana avy amin'ny antoko fahatelo - toy ny Islamic Society of the Washington Area (ISWA). Ny fikambanana dia manara-maso ny fizotry ny famokarana manontolo, tsy ny vokatra ihany. Ankoatr'izay, ny orinasa rehetra dia tsy maintsy manana fotodrafitrasa voasoratra ara-panjakana. Izy ireo koa dia mitaky fanandramana ny porcine (kisoa / kisoa) ADN sy salmonella, miaraka amin'ireo protokolà amin'ny fitsapana ny haavon'ny alikaola.
Raha nandany fotoana ianao hijerena ireo fangaro amin'ny lokomena tianao indrindra dia sarotra ny mamaritra ny fikajiana ireo akora, amin'ny tranga maro dia tsy azo atao ny manonona ireo akora akory. Azo inoana fa ny vokatra hatsarana ankafizinao dia ahitana akora azo avy amin'ny tavy biby, kitroka, na faritra amin'ny vatana hafa.
Ny fahamarinana na ny manahirana
Mety ho voarara ny fitsapana biby any amin'ny firenena maro; na izany aza, misy orinasam-pifandraisana marobe marobe izay manohy mizaha toetra ny biby any amin'ireo firenena izay avela ny lalàna momba ny habibiana, toy ny Sina, Korea ary Russia. Ireo firenena ireo no manana orinasa mpamokatra kosmetika lehibe indrindra manome ny sasany amin'ireo mpaninjara kosmetika lehibe indrindra manerantany.
Any amin'ny firenena tandrefana, amerikana atsimo, ary eropeana (ao anatin'izany i Canada, Brazil, UK ary Torkia) dia tsy mahazo alalana ny fitsapana biby ary misy fikambanana matanjaka, ampahibemaso ary tsy miankina mizaka tena fa manaraka an'io fanao io.
Ho an'ny mpanjifa Muslin maro, ny filàna fampiasana kosmetika halal dia nampitombo ny fahafantaran'izy ireo ny habibiana ataon'ny biby ary nanampy tamin'ny fanovana ny fomba famokarana orinasa sasany ho amin'ny famokarana kosmetika etika kokoa.
Ao amin'ny tsenan'ny makiazy halal, dia nisy ny fitomboan'ny filan'ny kosmetika tsy an'asa ho an'ny ankizy. Araka ny filazan'ny International Labor Organisation, mihoatra ny 165 tapitrisa ny ankizy eran'izao tontolo izao voatery miasa an-jaza. Ny isan-jato lehibe dia misy ny ankizy miasa amin'ny toeram-pitrandrahana mampidi-doza mba hitrandrahana harena an-kibon'ny tany, na ozinina lehibe amin'ny fanangonana vokatra kosmetika sy fikolokoloana.
Ny fikolokoloana ny hoditra dia tombanana ho ampahany vokatra haingana indrindra amin'ny tsena kosmetika halal. Ny makiazy dia vinavinaina ho fizarana faha-2 lehibe indrindra. Ny Moyen Orient sy Afrika no tsena isan'ny faritra lehibe indrindra faha-2 aorian'i Azia ary mitentina 4.04 miliara dolara (2018). Satria ny Silamo dia ampahany lehibe amin'ny mponina ao amin'ny faritra, ny indostrian'ny fanatsarana tarehy mahazatra dia entina hanatanterahana ny filan'ity tsena ity.
Iba Halal Care no mpamokatra vokatra kosmetika voalohany manana fanamarinana halal. Tao amin'ny Love cosmetics dia namoaka tsipika fanatsarana tarehy voamarina halal. Mino ilay orinasa fa ny halal dia tsy vitan'ny akora azo avela fotsiny, fa momba ny loharanom-pahefana azo ekena, ny fampandrosoana ary ny etika ara-barotra ihany koa.
Salma Chaudry, mpanorina ny Halalcosco manana mari-pahaizana halal dia nanambara fa ny talen'ny orinasan-dry zareo dia halal ary mifantoka amin'ny fiarovana, kalitao ary ny fisorohana ny naiis sy mutanaiis - teny arabo ho an'ny maloto ary - zavatra izay nanomboka madio nefa voaloto. Mino i Chaudry fa tsy maintsy hozahana avy amin'ny loharano ny akora, ary ny valiny amin'ny toerana itodiana dia tsy maintsy hamarinina. Ho fanampin'izany, tsy maintsy misy ny fanamarinana ny zavamaniry ary ny fanampiana rehetra (izany hoe ny fofona tsy misy alikaola dia tsy maintsy misy halal. Hoy i Chaudry: “Misy ny fironana mandeha sy mandeha, fa ny halal kosa dia safidy amin'ny fomba fiainana ho an'ny Silamo.”
Mpivarotra an-tserasera, Prettysuci, dia heverina ho vavahady an-tserasera voalohany manerantany amin'ny vokatra kosmetika halal. Izy io dia manana marika halal iraisam-pirenena 15 misy vokatra 200. Na ireo marika lehibe toa ny Shiseido Japoney aza dia nahazo mari-pankasitrahana halal (2012).
Halal: fandinihana amin'ny fotoana tena izy
1. Ny vehivavy dia mazàna mihinana lokomena. Mety tsy fanahy iniana izany, fa misy fironana voafaritra kosa handetika ny molontsika ary amin'izay dia mihinana ampahany kely amin'ny vokatra - izay mety ho an'ny tavy biby tsy misy halal, alikaola ary akora simika manimba.
2. Mamorona sy miditra amin'ny hoditray ny fototra. Miala amin'ny makiazy mihoatra ny 8 ora ve ny makiazy? Mety hisy ny vitan'ny vokatra amin'ny hoditra (antony tsara handinihana ireo akora ao anatiny). Ny vokatra makiazy sy fototra dia misy gelatin, keratin ary collagens, nateraky ny kisoa, ary mety ho azon'ny hoditra.
3. Vokatra fikarakarana fantsika tsy tantera-drano… mifoka rivotra ve izy ireo? Miaraka amin'ny vavaka in-5 isan'andro, ary fombafomba alohan'ny vavaka izay mitaky fanasana tanana sy sandry, ny fantsika amin'ny fantsika nentim-paharazana dia tsy mifanaraka amin'ny ankapobeny, satria manakana ny rano tsy hifandray amin'ny fantsika izany. Ny orinasa sasany izao dia mamokatra poloney mifoka rivotra izay mamela ny rivotra sy ny hamando hamaky ny hoho. Izy io koa dia heverina ho safidy mahasalama kokoa ho an'ny enina fantsika nentim-paharazana izay manakana ny lalan'ny hamandoana sy ny oxygen amin'ny hoho.
Ny hetsika: Amerika Avaratra amin'ny-kosmetika @ Javits
Ity hetsika ara-barotra manan-danja ity dia toerana ihaonan'ireo mpamorona sy mpamorona fikarakaran-tena manokana hizaha ny teknolojia farany sy farany izay azo ampiasaina amin'ny vokatra vaovao. Ny hetsika dia manome ny mpanatrika fahafaha-manao fifandraisana amin'ny indostria vaovao, mianatra avy amin'ireo manampahaizana, ary mifanerasera amin'ireo akora. Ity dia sehatra tonga lafatra ho an'ny marika indie ary ny programa fanabeazana dia manolotra hevi-baovao momba ny vokatra vaovao.